musha Tags Childhood Biography Diary- yevakadzi AMERICAN SINGERS
Tag: Childhood Biography Diary- nekuda kwemaikadzi AMERICAN SINGERS
Kugamuchirwa kumwana wedu Childhood Biography Diary for Female American Singers vose vanobata uye vakasiya basa.
Tinotenda mumiriri wemukadzi wese wekuAmerica ane nyaya yehuduku kune zita ravo. Iri tepa re archive rinotora nyaya dzinonakidza, dzinoshamisa uye dzinofadza pamusoro pevanhu vanozivikanwa kubva panguva dzavo dzehuduku kuti vauye.
Mune ino peji, zvinyorwa zvitsva zvinowedzerwa kune edu echikadzi eAmerican vaimbi 'dura nguva dzose. Kudzokororwa kunoitwawo kune zvakatoburitswa zvinyorwa, zvichikupa mukana wekuwana kune epamusoro-soro uye neruzivo ruzivo rwuripo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei!